Eminyakeni yamuva, "Dota 2" isibe omunye ethandwa kakhulu ukuzijabulisa bakamalalahlengezela yabadlali abaningi emhlabeni. Eqinisweni, akukho sakhiwo, akukho ukukhuthazwa eside yohlamvu - njalo uqale lonke futhi, futhi ngaso sonke isikhathi udinga kabusha ukumpompa hero. Luthini olwakho "Dot" ekhethekile ngakho, ngoba unganakile kubukeka kuhle yisicefe futhi okuyisidina? Ngempela, ingxenye kungase kubonakale kunjalo, kodwa empeleni izinto sezihluke kakhulu. Okokuqala, wena njalo ukudlala nezitha ezahlukene, futhi ngamunye wabo indlela yayo siqu umlingisi. Okwesibili, iningi lalezi abalingiswa kule mdlalo kukhona okuningi, ngakho ungazama kubo bonke, hhayi esisodwa. Okwesithathu, wena ekuhlakuleleni mdlalo, futhi ekugcineni uqale ukumpompa kahle uhlamvu, ukusabalalisa amakhono akhe, thatha izinto ezilungile. Futhi-ke, kufanele kuqashelwe ukuthi "Dot" isebujameni njalo yentuthuko. Lokhu kusho ukuthi umdlalo is hhayi kuqeda - ke njalo wanezela izinto, izinhlamvu, amakhono nokunye. Ngakho-ke, usuku ngalunye oludlulayo kuba mnandi kuphela ngaphezulu. Kodwa uma ungake nje kunzima njalo, ngakho umhlahlandlela kuzoxoxwa ngaleso Duma namuhla. "Dota 2" ugcwele abalingiswa ezahlukene, ngamunye ephethe kunezinzuzo zako kanye nebubi, kodwa amandla okuhle uyisidala - yinto idonse njalo abadlali. Futhi yilokhu ongakunika Doom.
Kungani lokhu uhlamvu?
Ngesikhathi umdlali ubona umlingisi Ukukhetha screen okokuqala, angase ngokushesha iwela stupor - kanjani ukuqonda, ukuqala play for uhlamvu? Ungakhetha siqu sakho bese uqala ukuba kancane ekhankasela, kodwa ngoba wonke umuntu ufuna ngokushesha ngangokunokwenzeka ukuze futhi ngingafune kufeza lutho - le nhloso futhi kuhloswe ukuba aqondise Duma. "DotA 2" asiqaphelisa yakho ngesikhathi esisodwa ezintathu amakilasi of izinhlamvu, Nokho, okuyinto, akakwazi ukunquma ngokuthe ngokuphelele indlela yokuthuthuka yabo. Iqiniso lokuthi ezinye izinhlamvu ekuqaleni ephakeme ngamandla, abanye - lobubhalo, futhi eyesithathu - ingqondo. Futhi ngamunye ngalezi zinkomba abe ukukhula esitebeleni. Futhi uma ufuna ukwazi ukuthi kungani kudingeka ukhethe zona kanye Duma impendulo yokuqala - kuthi enye inzuzo eliphakeme ngezikhwepha in the game. Sikhishwe yokuthi umonakalo akhe initial ngakho impela high, ukuze amazinga eyengeziwe iba silo real, okuyinto ngokuya amabutho indiva izinhlamvu ngazinye. Ngaphezu kwalokho, kuye kwaba kuhle kakhulu intelligence uzuza, unikezwa neqiniso lokuthi wayeseholela bagxila amandla. Lokhu kalula wachaza iqiniso lokuthi Doom has a amakhono ezithakazelisa kakhulu, ngoba ofuna ukuba mana ngangokunokwenzeka. Ngithemba wena umxhwele, futhi unesifiso ufunde phezu Duma. Nokho, "DotA 2", kuyinto ekujaheni ukunikeza ezandleni amaqhawe abadlali aziwa eziqine - siyenzeka ukulinganisela ngendlela ephelele. Ngakho-ke, uma kudingekile ukuthi ngezinye bokwenza lokhu uhlamvu.
Buhle Duma umxhwele kakhulu, kodwa yini engase ishiwo yokuntula zayo umhlahlandlela Duma? "DotA 2" - umdlalo lapho ukuhlaselwa komzimba zidlala indima ebalulekile. Njengoba kushiwo ngenhla, umonakalo kusuka Duma Chic, kodwa ukusungula ibhalansi ngenxa noma yini oyidingayo. Ngakho-ke, kube inkomba kokuqala ukuhamba nokukhula kulo amakhono ushiye okuningi okufanele oyifunayo. Lokhu kusho ukuthi cishe lonke umdlalo Doom egijima ngokuthi "enqunu", ukuthi akuyona bavikeleka ekuhlaseleni ngokomzimba. Futhi bangadlala ihlaya elibi. Ekuqaleni, Dumas linezinkinga nge mana, ngakho ikakhulukazi ayikwazi uguquke ukusetshenziswa amakhono. Kodwa ngesikhathi esifanayo kuyingozi ukuya ku Melee, lapho njengoba zingafa ngokushesha imicabango yethu. "DotA 2" - Hyde (ihlathi nansi indawo esemqoka) ukuze ubunjalo lo mdlalo uzokutshela ngendlela ukuze ujike ubuthakathaka ku izinzuzo Duma nendlela ukwenza kube ngisho izinzuzo kuzenze zibathinte nakakhulu edangalisayo.
Izici ucabange futhi yini okufanele uyenze nabo
Ngakho, kufanele kuqale izimfanelo lo muntu okukhulunywa ngaye - kodwa lokho kumane nje hlamvu uzokutshela ukuqondisa phezu Duma. "DotA 2" ehlathini - indlela ukulima? Lona umbuzo ukuthi wena kufanele ukhathazeke kakhulu uma oyikhethile uhlamvu yakho Duma. Zikhona nezinye izinkinga, kodwa Kamuva sizoxoxa ngokuthi. Manje sibheke-ke, yini Doom uzoqala play. Anakho 26 amandla kanye nokukhula 3.2 ezingeni ngalinye - i sibalo sikhulu umxhwele futhi kwangethusa lokho. 13 intelligence - hhayi okungaka, kodwa ukukhula 2.1 kuzokuvumela ngokushesha shayela mana edingekayo. Kodwa nge zonke dexterity ngezinyembezi - inkomba 11 nokwanda kokungabi 0.9, lokhu nakanjani kudingeka senze okuthile. Kulandele impilo - ne 644 ekuqaleni umdlalo, it kwandisa kuze kufinyelele 2483 kwi 25 ezingeni. Mana kwandisa nge kancane ezingaphezu kwekhulu ukuba ezingaphezu kwenkulungwane - kuzosisiza ngakho. Umonakalo inyuka ngesikhathi uzotshala kathathu, kodwa ukuzivikela ikhula 6 kuphela - bese kuphela 25 ezingeni. Manje wena ujwayelene izici eziyisisekelo umlingisi, yini ingabe ukulungele ukuqhubeka ekuqondiseni Duma? "DotA 2" - umdlalo lapho ungatholi ukuwina on ukusebenza okumsulwa, udinga amakhono. Futhi ngazo futhi Kuzoxoxwa.
Ngakho, bonke izinhlamvu kukhona ezine amakhono - kusukela yokuqedela eshibhe nokuthi umpofu, eqolo futhi enamandla, + ngakho wahlela Dota 2. Hyde Duma Kungenzeka ukuletha kini izindaba ezinhle - ikhono kuqala ukuthi uhlamvu nhlobo akakwazi ngokuthi ababuthakathaka - ngosizo, ukwazi ukuncela iyiphi ungangena lesitha, hlangothi kwakhe noma, ngenkathi usafuna yamakhono akhe. Ngakho-ke kubalulekile wazi ikhono ingene, ukuze bakwazi ngesikhathi ukuze uthole ukuthi yini okudingeka esimweni esithile. Ukusebenzisa yesibili Doom amakhono wokhela isikhala emhlabeni ngokwayo, owabangela umonakalo omncane nesitha. Kodwa lokhu akuwona umgomo oyinhloko - eqinisweni leli khono isetshenziselwa ukubaleka Tactical, uma isetshenziswa Duma esingashintshi kuze kufinyelelwe esikhathini anda ukuvuselelwa rate ukunyakaza. Lelo khono yesithathu - lokhu kuyinto ilotho ezithakazelisayo. Ngalo, ungakwazi umlilo umphefumulo isitha, kubabulali umonakalo evamile futhi lihle kuye. Kodwa into ezithakazelisayo wukuthi, kuye abaphikisi angabekwa ke ungathola umonakalo ngamaphesenti amabili yempilo yakhe, ukuze nge inhlanhla efanele leli khono kuyoba esinamandla. Awu, amakhono sesine - ipharadesi langempela, nalo ungakwazi ukuvimba kuze kube nanhlanu imizuzwana ukusetshenziswa amakhono kunoma izinhlamvu isitha, ngenkathi uzothola umonakalo ohlala njalo. Sekuvele kukhona akunakwenzeka ukuba aqaphele ukuthi kwamakhono Duma - iyisikhali esinamandla.
Ikhono Isakhiwo - kuyinto ezithakazelisa kakhulu, okubandakanya umhlahlandlela Duma. "Dot 1" inikeza amakhono athile, kodwa engxenyeni yesibili Kuyathakazelisa kakhulu. Ngakho-ke, abanekhono ukudonsa Duma Kunconywa amazinga eziyisikhombisa zokuqala ukusebenzisa amaqhinga kushintshana uzotshala ikhono kuqala nezinye ezintathu - njengoba ezingeni lwesikhombisa uyoba izinga eliphelele leli khono. Khona-ke udinga ukumpompa ngangokunokwenzeka eyesithathu ilotho amakhono, ukudweba wesine, spool kuze kufike lesibili, bese ephakanyiswe phezulu amakhono lesine kanye nokusebenza.
Ngokwemvelo, lokhu kusho imidlalo ngokuba Duma zikhona izindlela ezahlukene. Ukuze uqale, kudingeka balukhulume pharming, okungukuthi ukubulala aqala nabaphikisi ababuthakathaka, njengoba kusaqalwa ungakwazi neze okwenza ulutho olumelana lezitha ezinamandla. Kuphela uma wena podnaberetes kancane nakho futhi uthole mana ezinhle - yiya ngabaphikisi ezinkudlwana.
Kulula - ancike emandleni akhe amakhulu, ungakhohlwa mayelana namakhono Ukuvikelwa nokusetshenziswa. Bazokusiza ekuvuleni ukuze lizuze ngisho nezitha ezinamandla kakhulu.
Njengoba imishini, ungasebenzisa amasethi ezahlukene, kodwa okubaluleke kakhulu - kungenzeka ukukhulisa ukuzivikela yakho kunalokho ukuthi ngokwemvelo sags kabi futhi yena aliphumi. Ngakho bayakhohlwa nezinye izinkomba - ukugxila Ukuvikelwa.
Endaweni Breakout for World of Tanks. Kanjani ukuze ifohle iye yaphelela ngezingubo zempi e World of Tanks
"Morrowind" - ukudlula omunye eyinkimbinkimbi kunazo RPG imidlalo
12 amathiphu ukuze sisinde kule game Bemisebe 4
Idiphozi Bovanenkovo. gas field Bovanenkovskoye
Indlela ukulanda izincwadi mahhala ku "iPads" ezingabizi kakhulu futhi elula ngendlela
Izinhlobo izisekelo nedivayisi yabo
U-Yuri Nikiforov: umdlali webhola wamaqembu amane kazwelonke